1। समय सीमा समाप्त
2। डापोक्सिन के हो?
3। PE को लागि डैक्सक्सेटिन को प्रभावशीलता
4। ड्याक्सटेटिन कसरी लिने?
5। ड्याक्सटेटिन लिनु अघि के गर्नुपर्छ?
6। Dapoxetine डोजज
7। Dapoxetine: के यो सबैको लागि उपयुक्त छ?
8। अन्य ड्रग्सको साथ ड्याक्सटेटिन
9। अब डापोक्सटेइन लिन र "byebye" पीई लाई भन्नुहोस् !!!
10। Dapoxetine को प्रयोग पछि स्वास्थ्य जोखिम छ?
11। Dapoxetine FAQ
समयपूर्व स्खलन (पीई) एक सामान्य यौन विकार हो कि पुरुषहरु को 30% को बारे मा असर गर्छन। यो स्थिति कम से कम एक क्षणिक सेक्सन को भित्र एक मिनेट को कमजोरी नियंत्रण मा विशेषता हो। यो यौन विकार, जुन कुनै पनि यौन सक्रिय मानिसलाई असर गर्न सक्छ, यसले मानिसहरूको अहंकारलाई पखाल्न सक्ने मनोवैज्ञानिक नतिजाहरू पार गरेको छ।
सौभाग्य देखि, वहाँ चिकित्सा उपचार हो जो समय भन्दा पहिले स्खलन उपचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र डैक्सोक्सिन आज बजार मा सबै भन्दा प्रभावशाली व्यक्ति मध्ये एक हो। यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ भने पीई कसरी उपचार गर्ने?, तपाईले खोज्नु भएको सम्पूर्ण उत्तर खोज्न को लागी हाम्रो विस्तृत डैक्सक्सनेट समीक्षा पढ्नु पर्छ, र धेरै धेरै।
डापोक्सिन के हो?
Dapoxetine एचसीएल (129938-20-1) एक चुनिंदा सीरोटोनिन रिप्पेक अवरोधक (एसएसआईआरआई) औषधि हो जुन विशेष रूप देखि तैयार गरिएको छ र स्पष्ट रूप देखि समय भन्दा अगाडी स्नेह को उपचार गर्न को लागी। यो औषधीले सिटोटोनिन ट्रान्सपोर्टरको स्तर परिवर्तन गरेर काम गर्दछ, पछि सिंकटोनिक सफ्टमा सेरोटोनिनको कारवाही बढाउँछ, यसैले परिणामको रूपमा अजिंकर विलम्ब बढाउँछ।
Dapoxetine व्यापारिक रूपमा Priligy को रूपमा मार्केट गरिएको छ, र यो प्रयोगको लागि अनुमोदित गरिएको छ र विश्वभरिका 50 भन्दा बढी देशहरूमा मार्केट गरिएको छ। यो औषधि पनि Westoxetin, Primaxetin, Joytab, Ever Long, Sustinex, Longride Pentenal-30, Lejam, Kutub, Joybox, Duratia, and Dumax सहित विभिन्न ब्रान्ड नामहरूमा बेचेको छ।
त्यहाँ धेरै देशहरू स्वीकृत छन् dapoxetine बिक्रीको लागि 18 वर्ष को उमेर मा व्यक्तियों को। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका मा खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा वर्तमान मा स्वीकृत छैन। यसको मतलब तपाईंले अमेरिकामा ड्याक्सिसेन प्रिन्ट्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न
जब dapoxetine प्रारम्भमा बनाइएको थियो, यो अर्थ-अवरोधकको रूपमा प्रयोग गरिने थियो तर यो भाग्यले गर्दा, एक अनियमित परिणाम पत्ता लगाइएको थियो - औषधि को क्षणमा विलम्ब गर्न को लागी प्रभावकारी हुन सकेन। आज, डापोक्सनेट को पीई को लागि एक उपचार को विकल्प को रूप मा व्यापक रूप मा प्रयोग गरिन्छ र एक एंटीडेन्टेंटेंट को रूप मा नहीं। अन्य एसएसआईआरआईको विपरीत, डैक्सोक्सनेटले शरीरबाट छिट्टै अवशोषित र सफा गरिरहेको छ, यसले पहिलेको स्खलनको लागि उपयुक्त उपचार गर्दछ। Ipamorelin लाभ र इम्पोरेलिन प्रयोग मा मार्गदर्शन
PE को लागि डैक्सक्सेटिन को प्रभावशीलता
यौन सन्तुष्टि एक व्यक्तिको यौन स्वास्थ्य र भलाइमा एक प्रमुख कारक हो। असाधारण स्खलन विलंबता समय (आईईईएलटी), जुन मुख्य रूप देखि योनि प्रवेश को शुरुवात र असाधारण स्खलन को शुरुवात को बीच, यौन प्रदर्शन र सन्तुलन को धारणा मा एक प्रासंगिक कारक हो।
चिकित्सकहरूले प्रायः आईईएलटीलाई विचार गर्दछन् र पहिले समयको क्षणमा उपचार गर्ने बेला। छोटो आईईईएलटी भएका पुरुषहरूका लागि, उनीहरूले चयनत्मक serotonin रिप्पेक इनबिस्टारहरूबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छन्। यो छ किनकी SSRIs भौतिक एक्सेलियरिङ प्रक्रियासँग जोडिएको ब्लक प्रक्रिया ब्लक गर्नुहोस्। त्यस कारणका लागि, एसएसआरआरहरू समयको स्खलनको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
डापोक्सनेट (सीएएस 129938-20-1) एसएसआरआई को एक हो जुन समय भन्दा पहिले स्खलनको उपचारमा अत्यन्त प्रभावशाली छ। यो उपयोगी औषधिले रोगको उत्तेजनालाई ढिलाइ दिन्छ त्यसैले यसरी रासायनिक रोक्छ। ड्रगको सक्रिय भाग छिट्टै शरीरबाट अवशोषित हुन्छ र यसलाई लिनु दुई घण्टा पछि काम गर्न सुरु हुन्छ।
अध्ययनले प्रकट गरेको छ कि यो पीई दबाइले अन्तमा योनि खनिज विलम्बता समय बढाउँछ। एक अध्ययन मा, 1 मिनेट को औसत आधारभूत आईईएलटी वाला पुरुषहरु लाई 3.1 एमजी खुराक लेने पछि 30 मिलीग्राम र 3.6 मिनेट लेने पछि औसत 60 मिनेट मा सुधार भयो। यसको मतलब ड्याक्सिसेन यौन गतिविधि को बढावा मा वास्तव मा प्रभावी छ।
ड्याक्सटेटिन कसरी लिनुहोस्?
Dapoxetine hcl (dapoxetine हाइड्रोक्लोराइड) 30 मिलीग्राम र 60 मिलीग्राम ट्याबलेटमा उपलब्ध छ, जुन मौखिक रूपमा लिन सकिन्छ। अन्य SSRI को विपरीत रोजमर्राको लिनु पर्छ ताकि वांछित प्रभाव को ट्रिगर गर्न को लागी, डैक्सोक्सनेट को "आवश्यक" आधार मा लिइन्छ। यो औषधि धेरै चाँडै काम गर्दछ, त्यसैले तपाईले दैनिक अनुमानको आधारमा यौन सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। तपाईलाई निम्न कार्य गर्न पनि सम्झनु पर्छ:
सेक्स गर्नुअघि एक ड्याक्सक्सनेट ट्याब्लेट 1-3 घण्टा लिनुहोस्,
ट्याब्लेट बिना गल्ती ट्याब्लेट निलो पार्नुहोस् किनकि यो कडा स्वाद छ। साथै, औषधि चाइनाले यसको प्रभावकारिता घटाउन सक्छ।
एक ट्याबलेट कम्तिमा एक पूर्ण गिलास पानीको साथ लिनुहोस्।
तपाईं ट्याबलेट लिन वा बिना नै बिना लिन सक्नुहुन्छ। तपाइँ यसलाई खाने वा अघि वा पछि पनि लिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि, निर्माताले डिपोक्सटेइन लिने खानेकुरालाई खानेकुराको रूपमा खानेकुराको रूपमा लिने सल्लाह दिन्छन् किनभने यसले औषधीको प्रभावलाई ढिलाइ गर्न सक्छ।
ड्याक्सटेटिन लिनु अघि के गर्नुपर्छ?
Dapoxetine उपचार सुरु गर्नु अघि, तपाईंले आफ्नो चिकित्सकलाई अतीत ओर्थोस्टेटिक घटनाहरूमा फोकस गर्ने बारेमा सूचित गर्नु पर्छ। डाक्टरले एक ओर्थोस्टेटिक परीक्षण (पल्स दर, रक्तचाप, सुपरइन र खडा गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंसँग ओर्थोस्टेटिक प्रतिक्रियाहरू वा ओर्थोस्टेटिक बाकीको कुनै इतिहास छ भने यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया प्रकट गर्दछ, ड्याक्सटाइटिनसँग उपचार गर्नु पर्छ। किन सिब्रामामिन वजन घटाने मा धेरै लोकप्रिय छ?
ड्याक्सबाइटिन लिनु भन्दा पहिले, तपाईंको डाक्टरलाई सूचित गर्न महत्त्वपूर्ण छ भने:
तपाईं समय समय देखि बेहोशी,
तपाईं कुनै पनि हृदय समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ
तपाइँसँग एक क्लटिङ वा रक्तपात गर्ने विकार छ
तपाईं एनिमेटेड हुनुहुन्छ
तपाईं ग्लूकोमा छ
तपाईंसँग जिगर समस्याहरू छन्
तपाईंसँग गुर्दे समस्याहरू छन्
तपाईं ड्याक्सटिकइन सामाग्री मध्ये कुनै पनि एलर्जी हुनुहुन्छ
तपाईंसँग मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको इतिहास जस्तै उन्माद, अवसाद, द्विध्रुवीय विकार, वा कुनै पनि अन्य अवस्था जुन कम वा उच्च मूडको कारण हो,
यदि तपाईंको डाक्टरले तपाईंको लागि ड्याक्सक्सनेट लिनको लागी यो सुरक्षित पाउँछ भने तपाईलाई प्रदान गरिएका सबै सिफारिसहरू पालन गर्न निश्चित हुनुपर्दछ। प्याक भित्रबाट निर्माताको मुद्रित जानकारी प्याामलेट पढ्न निश्चित हुनुहोस्। पर्फलेटले ड्याक्सबाइटिनको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी, प्रयोगका लागि निर्देशनहरू सहित, सावधान सावधानीहरू र साथै सम्भावित साइड इफेक्टहरू जुन औषधि लिन पछि अनुभव गर्न सक्दछ।
सुझाव गरिएको सुरुवात खुसी एक 30 मिलीग्राम ड्याक्सक्सेटिन ट्याब्लेट हो। यदि 30 एमजी खुराक अपर्याप्त मानिन्छ भने, तपाईंको चिकित्सकले पछि तपाइँको एक्स लाई एक 60 मिलीग्राम ड्याक्सक्सेटिन ट्याब्लेटमा निर्णय गर्न सक्छ। यदि तपाई भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईंको डाक्टरले उच्च खुट्टाको वर्णन पनि गर्न सक्दछ 30 मिलीग्राम खुट्टा लिने कुनै साइड इफेक्टको अनुभव गर्न।
चूंकि त्यहाँ यो औषधिको लागि कुनै निश्चित खुराक रिमिम छैन, निर्धारित तालिका छुटेको छ dapoxetine खुराक धेरै सम्भव छैन। ओभरडोजको अवस्थामा, यदी यदि एक भन्दा बढी डैक्सक्सनेट ट्याब्लेट 24 घण्टा भित्र भित्रिएको छ भने, यसलाई सिध्यात्मक हेरचाह गर्न चाहिएको छ। ओभरडोजको लक्षणहरू समावेश छन्:
बढेको हृदय दर
तामाङको अंग, आदि
कुनै पनि प्रतिकूल प्रभावहरूबाट जोगिनका लागि, तपाइँले:
Dapoxetinetablets लाई तपाईंको डाक्टरले ठीकसँग अनुशंसित लिनुहोस्,
लेबलमा उल्लिखित सबै प्रयोग निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्,
सिफारिस गर्नु भन्दा कम भन्दा ठूलो वा ठूलो मात्रा मा ड्रग नगर्नुहोस्,
Dapoxetine ट्याब्लेटहरू लिँदा तपाईंको डाक्टरसँग नियमित अनुगमन गर्नुहोस्।
राम्रो समाचार भनेको dapoxetine hcl (dapoxetine हाइड्रोक्लोराइड) को समय भन्दा पहिले नै स्लाइस को उपचार मा एकदम प्रभावी छ। नहीं-यति राम्रो खबर यो छ कि, केवल धेरै दबाइहरु जस्तै, डैक्सोक्सिन को यसको साइड इफेक्ट को उचित हिस्से छ। एक अध्ययन मा, जो ड्याक्सटेटिन ले लिया मान्छे निम्नलिखित डैपरोक्सिन साइड इफेक्ट को सूचना दी:
मतभेद: यो सबैभन्दा सामान्य रिपोर्ट ड्याक्सटेटिन साइड इफेक्ट हो। अध्ययनले देखाउँछ कि 10 प्रतिशत पुरुषहरूको बारेमा जो 30 मिलीग्राम र 23 प्रतिशत मानिसहरूको बारेमा लिनुभयो जसले 60 मिलीग्राम खुवाए।
चकलेट / लाइटहेडनेस: यो दोस्रो सबैभन्दा आम ड्याक्सक्सेटिन साइड इफेक्ट हो, जसको6प्रतिशत रिपोर्ट गरियो जसमा 30 माइग्स डाइस र 11 प्रतिशतको बारेमा यी व्यक्तिहरूले 60 एमजी खुराक लिनुभयो।
टाउको दुखाइ: 5.6 प्रतिशत मानिसहरूको बारेमा जो 30 माइग्स डक्स लिनुभयो र9प्रतिशतको बारेमा सोचेका थिए जसले 60 माइग्स डोज लिइसकेका थिए।
दारा: 3.5 प्रतिशत र7प्रतिशतको बारेमा, जसले 30 मिलीग्राम र DNXX मिलीग्राम क्रमशः अनुभवी दस्तक को 60 मिलीग्राम लिनुभयो।
Somnolence: 3.1 प्रतिशत मानिसहरूको बारेमा जो एक 30 मिलीग्राम लिइएको र 4.7 प्रतिशतको बारेमा लिने क्रममा 60 एमजी खुराकले यो साइड इफेक्टको अनुभव गरेका थिए।
अन्य आम डैक्सक्सेटिन साइड इफेक्ट्स जसमा रिपोर्ट गरिएको थियो नाफोफरीन्गिनाइटिस, अनिोनिया र थकान, जो 2-3 प्रतिशतको बीचमा प्रभावित हुन्छन् जुन 30 मिलीग्राम र 3-4 प्रतिशतको बीचमा 60 माइग्स डक्स लिने गरिन्छ। डुपाक्सिनन को केहि सानो साइड इफेक्ट पनि छन्, जसमा शामिल छ
बजहरूमा बजाउँदै वा बजाउँदै
भ्रम र घर्षण
फास्ट / अनियमित हृदयघात
तपाईंले प्याकेज भित्र निर्माताको जानकारी प्यामलेटमा डैक्सोक्सिन साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूची पाउनुहुनेछ। शरीर दुर्व्यवहारमा समायोजित भएपछि प्रायः दुबै पक्षमा प्रभाव पार्दछ। जबकि त्यहाँ धेरै साइड इफेक्टहरू हेर्नका लागी छन्, यसको अर्थ यो होइन कि सबैले तिनीहरूलाई अनुभव गर्दछ। यदि तपाइँ ड्याक्सटिनन साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, यो अहिले नै चिकित्सा सहायता खोज्न महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाईं चकलेट वा हल्का महसुस गर्नुहुन्छ भने, झूट नगर्दा वा घुट्न बीचको टाउकोमा बस्न नसक्दा। यदि ड्याक्सक्सेटिन लिनुमा बिरामी वा पसीना महसुस हुन्छ भने, बस्नुहोस् वा झूट नगर्नुहोस् जबसम्म भावनाले घटेको र घृणा गर्न नसक्ने सम्म पुग्छ। तपाईंको चिकित्सक वा फार्मासिस्टसँग बोल्न पनि अत्यधिक सल्लाहकार छ त्यसैले दुवै दुबै लक्षणहरू हटाउन उपयुक्त औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Dapoxetine: के यो सबैको लागि उपयुक्त छ?
धेरै अन्य औषधिहरू जस्तै ड्याक्सटेटिने सबैको लागि होइन। उदाहरणका लागि, यो औषधि मान्छे द्वारा लिइनु हुँदैन जुन पहिले नै स्खलनको साथ निदान गरिएको छैन। यसैले, तपाईलाई उचित परीक्षण हुनु पर्छ र ड्याक्सटिननसँग उपचार गर्नु भन्दा माथिको मानदण्डको साथमा समयको समय भन्दा पहिले नै स्खलनको उचित निदान दिनुपर्छ।
यदि तपाइँसँग गम्भीर बीमारी छ भने, तपाइँ ड्याक्सिटिने उपचारका लागि उत्तम उम्मेद्वार पनि होइनन्। डोपाक्सिनिन उपचारको लागि राम्रो उम्मेद्वार हुनबाट रोगहरू मानसिक समस्या, हृदयको अवस्था र ग्लूकोमा पनि समावेश गर्दछ।
यदि तपाईं धेरै पुरानो वा धेरै जवान हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक राम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्न। 18 वर्ष भन्दा पुरानो वा पुरानो 64 भन्दा पुरानो भन्दा पुरानो ड्याक्सक्सनेट लिन हुँदैन।
अन्तमा, महिलाहरू राम्रो उम्मेदवारहरू हुन् dapoxetine उपचार। यो ड्रगले पुरुषहरूको लागि 18 र 64 वर्षको बीचमा सख्त रूपमा प्रयोग गर्दछ।
त्यसैले, को लागि ड्याक्सटेटिन को हो? ठीक छ, dapoxetine अनुमोदन गरिन्छ 18-64 वर्षको वयस्क पुरुषहरु मा समय भन्दा पहिले स्खलन उपचार। यस दबाइको विशेषताहरूको सारांशले बताउँछ कि डैक्सोक्सनेट केवल वयस्क पुरुषहरूलाई मात्र निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ जुन निम्न मापदण्डहरू पूरा गर्दछ:
2 मिनेट भन्दा बढीको असाधारण चकित विलम्बता समय (आईईएलटी) को साथ, स्नेहन मा खराब नियंत्रण,
पहिले यौन उत्तेजना संग पुनरावर्ती वा लगातार स्खलन, मा, वा अचानक प्रवेश र मानिस को इच्छा पछि,
पहिले देखि नै स्खलन को परिणाम को रूप मा स्पष्ट पारस्परिक कठिनाई या व्यक्तिगत संकट,
यौन सम्बन्धको बहुसंख्यक स्खलनको समय अघिल्लो छ महिना पछि प्रयास गर्दछ।
अन्य ड्रग्सको साथ ड्याक्सटेटिन
· डापोक्सिन + टाडालफिल (सीआईलिस)
शुरुवात स्खलन (पीई) र (ED) पुरुषमा दुई फरक यौन स्वास्थ्य समस्या हो, तर ED पीई भन्दा बढी गम्भीर समस्या हो। Cialis फास्फोडीस्टेरेज5(PDE-5) का एक छनौट अवरोधकर्ता हो, एक औषधि जुन लिंगको चिकनी-मांसपेशी संरचनाहरूमा प्रभाव पार्दै डिसफंक्शनको उपचारमा प्रभावकारी हुन्छ। ताडालाफिल, जो कि सियालिसको सक्रिय घटक हो, चाँडै शरीरले अवशोषित गर्दछ र यसलाई स्थापना गरेको लगभग 20-60 मिनेट पछि पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ र 24-36 घण्टाको लागि स्थापना कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
डिसफंक्शनका साथ केहि पुरुषहरू केवल उनीहरूको निर्माण पुनर्स्थापना गर्न चाहँदैनन्, तर यौन गतिविधि विस्तार गर्न पनि चाहन्छन्। Tadalafil / Cialis एक्लो पाउँदा dysfunction पुरुष लाई लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राख्न मद्दत गर्न सक्दैन। जे होस्, जब तिनीहरूले Cialis लाई dapoxetine सँग जोड्छन्, उनीहरूसँग कडा इरेक्शन हुन्छ साथै यौन गतिविधिको अवधि औसत 50-70 प्रतिशतले लम्बाउन सक्दछ।
यदि तपाईं दुबै काम र समयपूर्व स्खलनबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो थाहा पाउँदा ढुक्क महसुस हुन्छ कि ड्यापोक्साटिन सँगै ताडलाफिल सँग लिनु एकदम सुरक्षित छ किनकि औषधीहरूको सामान्य अन्तर्क्रिया हुन्छ। जे होस्, यी औषधीहरूको दीर्घकालीन प्रयोगको लागि एन्ड्रोलोजिस्टद्वारा प्रारम्भिक परीक्षण पूरा गर्न र निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ। Dapoxetine + Tadalafil (Cialis) प्रयोगको लागि आधारभूत सिफारिशहरू हुन्:
लागू औषधको लागी दुवै यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनु भन्दा पहिले औषधि लिन 1-2 घण्टा लिनुहोस्,
30 मिलीग्राम वा 60 मिलीग्राम ड्याक्सक्सेटिन र 20 मिलीग्रामको एक ट्याब्लेटको एक ट्याबलेट लिनुहोस् Cialis प्रति दिन,
ट्याब्लेटहरू पूर्ण रूपमा निलो पार्नुहोस्, तिनीहरूलाई चबाएर वा टुक्राहरूमा तोड्न,
तपाईंले यी औषधिहरू प्रयोग गर्नुहुने दिनको शराब नगर्नुहोस्।
यदि तपाईं निर्जलित छ भने ड्याक्सटेटिइन नदिनुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाइँ अस्थायी रूपमा खेलकुद प्रशिक्षण पछि औषधि प्रयोग गर्नदेखि टाढा रहनु पर्छ।
यदि तपाइँलाई बुखार भएको छ भने ड्याक्सबाइटाइन लिन नदिनुहोस्, वा तपाईंलाई ठंडको सुरुवात महसुस हुन्छ।
ध्यान दिनुहोस् कि ड्याक्सिटिनेट र क्यालिअसको समकालीन प्रयोग लामो समयसम्म निर्माण गर्न र लिब्रिड वृद्धि गर्न निषेधित गरिएको छ भने मेरो एनोर्डियल इन्फेरेशन वा आईसिमिक स्ट्रोकको पीडित पछि6भित्र। यी औषधिहरु को जोडी जोडी मा रोगको घाँटी जस्तै, सर्जिकल घावहरु, ब्वेंटेन्टेरियल दिल विफलता, नर्वे र हड्डी अपर्याप्तता, र धमनी हाइपरटेन्सन जस्ता रोगहरु मा पनि गर्नुपर्दैन।
यी ड्रग्सका घटकहरु को सम्भावना संग रोगीहरु, साथ साथै जननांग अंगहरुको संरचनात्मक विकारहरु संग ड्याक्सिसेन र सीआईएलिस लिनबाट बच्नु पर्छ। यी औषधीहरूको प्रयोग पनि यदि निषेध युक्त औषधि र Ipha-adrenoblockers लेइरहेको छ भने निषेध गरिन्छ।
Sildenafil, जो अधिक लोकप्रिय रूपमा जानिन्छ Viagra, एक औषधि हो कि दबाइहरु को एक समूह संग सम्बन्धित छ जो फॉस्फोमेस्टरएसेज प्रकार5इन्ब्बेटर्स को रूप मा निर्दिष्ट छ। यो प्रसिद्ध औषधि ईडीको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। एक पटक लिइयो, यो तपाईंलाई यौन संभोगको लागि बलियो निर्माण प्राप्त र बनाए राखन मद्दत गर्दछ। यो यौन उत्तेजित हुँदा तपाईं रक्तचापमा वृद्धि भएको रक्त प्रवाहलाई अनुमति दिँदै यो गर्दछ।
सामान्यतया Sildenafil तीन रूपहरुमा आउछ - 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम र 100 मिलीग्राम। सामान्य सिफारिश sildenafil खुट्टा 50 मिलीग्राम हो, जुन यौन गतिविधि मा संलग्न हुनु अघि चार घण्टा देखि आधे घण्टा सम्म लिन सकिन्छ। तथापि, खुट्टा, 25 मिलीग्राममा घट्न सक्छ वा धेरै कारकहरूमा आधारित 100 मिलीग्राममा वृद्धि हुन सक्छ, दबाइ, साइड इफेक्ट अनुभवी, शरीरको वजन, अन्तराष्ट्रिय चिकित्सा परिस्थिति, र अन्य दबाइहरूको प्रयोग सहित।
Dapoxetine एचसीएल र सिल्डेनाफिल एकसाथ लिइएको डिसफंक्शन र समयपूर्व स्खलनको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपचारहरूको रूपमा लिइन्छ। भियाग्रा मांसपेशियों को आराम र आफ्नो लिis्ग मा रगत को संचरण मा सुधार गर्न मा मद्दत गर्दछ। Dapoxetine, अर्कोतर्फ, तपाईंको लि of्गको उत्तेजनामा ​​ढिलाइ हुनेछ र यसैले क्षणमा विलम्ब। Dapoxetine + Sildenafil (Viagra) को प्रयोग को लागि आधारभूत सिफारिशहरु निम्न हुन्:
लागू औषधको लागी दुवै यौन क्रियाकलाप भन्दा पहिले 1 घण्टा लिनुहोस्,
डिपोक्सनेट को एक ट्याब्लेट र प्रति दिन एक भिडीयो को एक ट्याब्लेट लिनुहोस्,
यी औषधिहरू प्रयोग गर्दा अल्कोहल पेयहरू जोगाउनुहोस्।
तपाईंले डैक्सोक्सिनन र वियाग्रालाई समेट्नु हुँदैन भने:
तपाईं दुर्व्यवहार वा तिनीहरूको अवयव दुवैलाई एलर्जी हुनुहुन्छ,
तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई यौन संभोग नगर्ने सल्लाह दिएको छ,
तपाईंसँग रक्त प्रवाह कम गरी को कारण रेटिना तंत्रिका क्षति संग सम्बन्धित दृष्टि समस्या को इतिहास छ,
तपाईंसँग एक क्लटिंग वा रक्तपात गर्ने विकार छ,
तपाईं कुनैपनि प्रकार, जस्तै स्प्रे, मौखिक, छाला प्याच, वा सुब्बिंगुअल मा कुनै पनि प्रकारको नाइट्रेट औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं दन्त उपचार वा अपरेसनको लागी निर्धारित हुनुहुन्छ।
शिथिलता र शीघ्रपतनको उपचारको लागि लक्षित अन्य औषधि संयोजनहरू जस्तै, लिंगको शरीर रचनात्मक विरूपणका लागि dapoxetine र Viagra को संयोजनको सिफारिश गरिदैन। कुनै पनि प्रकारको लि de्ग विकृति, जस्तै Pyeronie रोग, cavernosal फाइब्रोसिस, वा एन्गुलेसन को साथ पुरुषहरु dapoxetine र भियग्रा को संयोजन ले यदि डाक्टरहरु संग नजिकबाट निरीक्षण गर्न पर्छ।
एउटा4घण्टा भन्दा बढी निर्माण गर्नु पर्छ, यसलाई तुरुन्तै चिकित्सा सहायता खोज्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो समस्या तुरुन्तै सम्बोधन गरिएन भने, ऊतकको क्षति र निर्माण हुने क्षमताको स्थायी हानि जस्ता अधिक गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यसबाहेक, कुनै पनि गम्भीर साइड इफेक्ट बिना विलम्ब डाक्टरलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ।
नाइट्रेट युक्त औषधिको अलावा, ड्याक्सटेटिन एचसीएलसँग कुराकानी गर्ने विभिन्न अन्य औषधहरू पनि छन्, यसैले समसामयिक साथै लैजान हुँदैन। ती समावेश छन्:
· मोनोआमीन ओक्सीडेस इनबिटर्स (MAOI)
यी सामान्यतया औषधिको एक क्लास हो जुन सबै भन्दा राम्रो शक्तिशाली औषधिको रूपमा चिनिन्छ। तिनीहरू विकार, सामाजिक फोबिया, आतंक विकार, डिसथिमिया, पार्किन्सन रोग र अन्य थुप्रै विकार सहित विकारहरूको एक विस्तृत दायराको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
मोनोआमीइन अक्सीडेस इन्डवाइटरले उनीहरूका धेरै औषधिक कुराकानीका लागि कुख्यात छन्। चुनिंदा सीरोटोनिन रिप्पेक इनबिस्टारहरू, जस्तै ड्याक्सक्सेटिन, केहि पदार्थहरू छन् जुन MAOI दबाइहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्। यसैले, यो सर्वोत्तम हो कि ड्याक्सबाइटिन लिनु हुँदैन यदि तपाई MAOI वर्गसँग सम्बन्धित कुनै औषधि लिइरहनुभएको छ।
गम्भीर साइड इफेक्टहरूबाट बच्न, तपाईंले MAOI दबाइको साथ उपचार रद्द गर्न पछि ड्याक्सक्सेटिन 14 दिन लिनु पर्छ। त्यसोभए, तपाईंले डैक्सोक्सिनलाई रोक्न पछि MAOI औषधि7दिन लिनु पर्छ।
थियियरिजेडेन को प्रशासनले मात्र QTc अन्तराल को लामो समय सम्म उत्पन्न गर्दछ, जुन गंभीर ventricular arrhythmias संग जोडिएको छ। Dapoxetine, जो CYP2D6 एन्टोनजिम को रोकथाम को थियियरइडेज को चयापचय को रोकथाम गर्छन। वृद्धि भएको thioridazine स्तरहरू प्रत्याशित QTC अन्तराल को लामो समय सम्म वृद्धि गर्न अनुमान गरिएको छ।
त्यसकारण, डैपिक्सनेटलाई थोरैरिजिनसँग प्रयोग गर्न सकिँदैन। तपाईंको उपचार thioridazine को साथ प्रयोग रोक्न 14 दिन सम्म पर्खनु पर्दछ। त्यसैगरी, तपाईले thioridazine प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्दा पहिले7दिन ड्याक्सक्सनेट प्रयोग गर्न को लागी छोडिनु भन्दा समाप्त हुन्छ।
· Serotonergic प्रभावहरु संग दबाइहरु
जस्तै अन्य चुनिंदा सीरटोनिन रिप्पेक इन्डक्टिटरहरू जस्तै, औषधीय वा हर्बल उत्पादन भएका डैपिक्सनेट को संयोजन गर्ने जसले सीरोटोनर्जिक प्रभाव पारेको हुन सक्छ जसको परिणाम serotonin-associated effects। त्यसोभए, जब ड्याक्सबाइटिन लिइरहेका छन्, तपाईले अन्य SSRIs, SNRI र अन्य औषधीय उत्पादनहरू जस्तै लिजेजोल, ट्रामडोल, लिथियम, Tryptophan, triptans, र सेन्ट जॉनको वर्टबाट बच्न सर्वोत्तम छ।
डिपोक्सटेइन एचसीएल लिँदा अन्य औषधीहरू जोगिनबाट बच्न समावेश छन्:
रक्तचाप र कमजोरीको कमजोरी कम हुन्छ। जब dapoxetine को साथ समवर्ती साथ प्रयोग गरिन्छ, अधिक रक्तचाप को जोखिम बढयो।
औषधि, जो चयापचय dapoxetine को लागि अचम्म छ, उदाहरण को लागि erythromycin, ketoconazole, fluoxetine, र विभिन्न एंटीबायोटिक्स, antifungal र एंटीवायरल एजेन्ट।
Tamsulosin र अन्य एक्क्सएनएमएक्सएक्स-एरेनरेन्डसेप्टर ब्लकहरू जुन प्रोटेटिक रोगहरु को उपचार को लागी प्रयोग गरिन्छ।
अब डापोक्सटेइन लिन र "byebye" पीई लाई भन्नुहोस् !!!
यदि समय भन्दा पहिले स्खलन तपाईंको टाउकोमा अँध्यारो हावा भएको छ भने, ड्याक्सटेटिइनले तपाईंलाई राम्रोसँग छुटकारा पाउन मद्दत गर्न सक्दछ। तिमी सक्छौ डैक्सक्सेटिन खरिद गर्नुहोस् एक सम्मानित अनलाइन भण्डारबाट अनलाइन। तपाईंको खरिद गर्नु अघि तपाइँको औषधि खरिद गर्ने तपाई अनलाइन स्टोरको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु अघि ग्राहक समीक्षाहरू पढ्न निश्चित हुनुहोस्।
क्या ड्याक्सक्सनेट प्रयोग पछि स्वास्थ्य जोखिम छ?
धेरै औषधिहरूको रूपमा, त्यहाँ केहि स्वास्थ्य जोखिमहरू छन् जुन ड्याक्सटाइटिनसँग सम्बन्धित छन् प्रयोग गर्नुहोस्। सौभाग्य देखि, सामान्य डैक्सक्सनेट साइड इफेक्ट गम्भीर छैन, र सबैले तिनीहरूलाई अनुभव गर्न पाउँदैनन्।
Dapoxetine को सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्ट्स, कम से कम 1 मा 10 को प्रभावित मान्छे) लक्षणहरू कम गर्न के गर्न
मतभेद तपाईंको औषधिलाई उपयुक्त औषधि सिफारिस गर्न सोध्नुहोस्
लाइट-हेडनेस वा चकलेट सास फेर्न वा चोट लगाउन नसक्नुसम्म रिस उठ्छ र आफूलाई चोट पुर्याउँदछ
टाउको दुखाइ तपाईंको डाक्टरलाई एक क्यान्सर ट्रेलर सिफारिस गर्न सोध्नुहोस्
दारा धेरै तरल पदार्थ पिउने र उपयुक्त औषधिको सिफारिस गर्न तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्
Dapoxetine कति लामो छ?
Dapoxetine एचसीएल अनिवार्य रूपमा एक अत्याधुनिक एसएसआरआर हो। अधिकतम प्लाज्मा एकाग्रताको समयको समय यो औषधि लिने लगभग 1-2 घण्टा हो। प्लाज्मा स्तर पीडित एकाग्रता को 5% भन्दा बढी भन्दा चौडाई चार घण्टा पछि पोस्ट-डोज हुन्छ। यस अर्थमा डोपबक्सिनले शरीरमा लगभग 24 घण्टाको लागि रहन्छ, जुन दबाइको ढिलाइको लागी औषधिको लागी एकदम लामो अवधि हो।
के ड्याक्सटेटिन लिँदा मैले मक्सी पिउन सक्छु?
अन्य मनोरञ्जनपूर्ण औषधिहरू जस्तै, रक्सी संग लिदै dapoxetine अत्यधिक निषिद्ध छ। यो कारणले गर्दा अल्कोपेटिभ प्रयोगसँग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरूको जोखिम बढ्छ। ढिलो प्रतिक्रियाहरू भएपछि, निद्रा वा चक्कर लगाउँदा सबै साइड इफेक्टहरू जुन वृद्धि हुन सक्छ जब डैक्सक्साइटाइनले शराबसँग एकसाथ लिइन्छ। उल्टो साइड इफेक्टहरू पनि हुन सक्छ, स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्याहरूको लागी पनि घातक हुन सक्छ।
मैले ड्याक्सटेटिन कब गर्नुपर्छ?
तपाईं गर्नुपर्छ ड्याक्सक्सेटिन लिनुहोस् "मांग" लगभग अनुमानित यौन गतिविधि भन्दा 13घण्टा सम्म। यसले अन्य औषधीहरूको तुलनामा अझ राम्रो बनाउँछ जुन लामो समयसम्म प्रभावकारी लाग्दछ। यद्यपि तपाईं यसलाई आफ्नो भोजनको साथ लिन सक्नुहुन्छ, यो उत्कृष्ट खाना खाने पछि डेपबक्सिन लिने छैन, यानी रातको खाना पछि।
म डापोक्सनेट कहाँ खरीद गर्न सक्छु?
यदि तपाईं ड्याक्सटेटिन खरिद गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं अनलाइन छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो सबै भन्दा राम्रो साइटहरु को जाँच गर्न को लागी यो उत्पाद को मूल्यहरु को तुलना गर्न को लागि बेचन छ। Dapoxetine खरिद गर्नु अघि, ग्राहक समीक्षाहरू सुनिश्चित गर्नका लागि सुनिश्चित गर्नका लागि अनलाइन किन्नु भन्दा बिक्रि विश्वसनीय छ।
मैले ड्याक्सटेटिनलाई कसरी भण्डारण गर्नुपर्छ?
डैक्सोक्सनेटलाई ठुलो, सुकिलो ठाउँमा र प्रत्यक्ष सिजन र ताप बाट टाढा राख्नु पर्छ। दृष्टिबाट बाहिर र बच्चाहरु सम्म पुग्ने ड्याक्सिसेनन राख्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।
म कसरी ड्याक्सिटिने उपचारको सबै भन्दा बाहिर निकाल्न सक्छु?
चिकित्सक वा फार्मासिस्ट द्वारा निर्धारित रूपमा डैक्सोक्सिनको रूपमा लिनुहोस्। यसको अर्थ निर्धारित भन्दा कम वा बढी छैन।
तपाईंको ड्याक्सटेटिइन मध्यस्थता लिन अघि यो समाप्ति मिति जाँच गर्नुहोस् यो प्रभावकारी र सुरक्षित छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
पछिल्लो निर्माताको निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस्, प्रयोगको लागि र डाइरेक्टरीको दिशाहरू सहित ड्याक्सक्सनेट प्रयोग गर्दा जोगिनबाट बच्न।
निस्किनु नपर्ने खालको डिपोक्सटेइन। पूरा गिलास पानी dapoxetinewith लिन निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको अन्य अवस्था समान भए तापनि केहि अन्य ड्याक्सटाइनिन औषधि नदिनुहोस्।
Dapoxetine प्रयोग गर्दा शराब नगर्नुहोस्, यसले ड्याक्सटेटिन साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
अन्य मनोरञ्जन औषधहरु संग डैक्सक्सनेट को संयोजन न गर्नुहोस।
तपाईंको डाक्टर नियुक्तिहरु लाई तपाइँको डाक्टर संग राखन को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस ताकि तपाईंको प्रगति निर्धारित हुन सक्छ।
ड्याक्सटेटिनका फाइदाहरू के हुन्?
यसले पीई को प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्दछ,
समय भन्दा कम सिक्नका लागि अन्य उपचारको विपरीत जसको क्रियाकलाप दुई हप्ताको सुरुवातपछि, सेन्टिमेन्ट पछि, डैक्सोक्सिनिनले आफ्नो एक्टिभ एनालिटिक्सको सुरुवात पछि केही घण्टापछि सुरु हुन्छ,
यो ड्रगले यौन गतिविधिको अवधि तीन वा बढी पटक बढाउँछ।
यो औषधी धेरै अन्य औषधीहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन क्षमता बढाउन सक्छ।
के dapoxetine मेरो ड्राइभ वा चलाउन मशीनरी चलाउने क्षमतालाई असर गर्छ?
सिकोप, नर्सोन्स, ब्लुन्डेड दृष्टि, चक्कर, र ध्यान मा अशांति डैक्सक्सनेट एचसीएल को सामान्य साइड इफेक्ट हुन्। त्यसकारण, जब तपाईं dapoxetine प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईलाई कुनै पनि स्थितिबाट जोगिन सल्लाह दिईएको छ जहाँ दुर्घटनात्मक चोट परिणाम हुन सक्छ, परिचालन खतरनाक मशीनरी वा ड्राइभिङ्ग सहित।
समयबारीको विभिन्न कारणहरू छन्, जैविक कारणहरु लाई मनोवैज्ञानिक कारणहरु बाट। यदि तपाईं एक कारण वा अन्य कारणको समय भन्दा अघिल्लो खजाना संग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले मौनमा पीडित हुनु हुँदैन। बिक्रीको लागि ड्याक्सटेटिनको उपलब्धता संग अनलाइन, तपाईं आफ्नो अवस्थाको उपचार र यौन गतिविधिको आनन्द उठाउन सकिन्छ। तपाईंको डाक्टरसँग कुराकानी गर्न निश्चित हुनुहोस् ताकि यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि ड्याक्सटेटिने तपाईंको लागि सही दवाई हो कि छैन।